ဒေါကျတာဖွိုးသီဟခံစားရေးဖှဲ့တဲ့ “ဘဝမှာ ရငျအနာရဆုံးအခြိနျ” အကျဆေးကို နှဦေးကိုကိုက … – PVTV Myanmar
ဒေါကျတာဖွိုးသီဟခံစားရေးဖှဲ့တဲ့ “ဘဝမှာ ရငျအနာရဆုံးအခြိနျ” အကျဆေးကို နှဦေးကိုကိုက ခံစားဖတျရှုထားတာကို နားဆငျကွရမှာဖွဈပါတယျ။
Like – 7.3K Share – 1047
Mg Bz says:
မအလ စဈဆေးရုံကိုအယုံမရှိ covid ဆိုပွီး လူတှကေို ဆေးထိုးသတျရငျ ဘယျလိုလုပျမလဲ? ??????
Oo Naing OoNaing says:
ကိုစု ကိုစု says:
Ni Ni Nyan Shwe says:
သင်းသင်းခိုင် သင်းသင်းခိုင် says:
2021-07-08 at 6:24 PM
2021-07-08 at 6:43 PM
လိမ် ဖမ်း သတ် အကြမ်းဖက် အာဏာရူး သူခိုးစစ်တပ် အမြန်အမြစ်ပြတ်ပါစေ
Ni Ni Nyan Shweု
2021-07-08 at 7:18 PM
ရငျနဈစှာခံစားရပါတယျ Dr လေးရယျ ရနတေဲ့ဘဝမှာပွညျ
သူအတှကျDrတို့ရဲ့စတေနာမတ်ေတာရော ပွညျသူတှရေဲ့အသကျ‌ရောပိုငျဆိုငျမှု့ရောဘာမှမလုံခွုံတော့ပါဘူး အားလုံး
Kaung Haling says:
2021-07-08 at 7:20 PM
2021-07-08 at 7:31 PM
2021-07-08 at 7:47 PM
2021-07-08 at 7:59 PM
အမှနျပဲ ကိုယျလိုသာမာနျပွညျသူတောငျ ဒီအဖွဈအပကျြတှကွေောငျ့ရငျနာရတယျဆိုရငျ ကိုယျကြိုးစှနျ့ခဲ့တဲ့ဆရာဝနျတှေ သူနာပွုတှကေ ပိုခံစားရမှာပေါ့💔💔💔
2021-07-08 at 8:58 PM
Rodney အသံနဲ့တူလိုကျတာ ပီသကွညျမွလို့
Khaing Thuzar Win says:
2021-07-08 at 9:35 PM
Wai Zin Thu says:
2021-07-08 at 9:36 PM
Suu Suu Nge says:
မအလ မင်းအောင်လှိုင်ရေ နင်က အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီ မဟုတ်တော့ဘူး…တိုင်းပြည်ဖျက် စစ်သူပုန် ဖြစ်နေပြီ…
နင်နဲ့ နင့်နောက်လိုက် အပေါင်းပါတွေရဲ့ အတ္တက ငါတို့ တနိုင်လုံးကို ဖျက်နေပြီ…နင်ကိုယ်နင် ခုန်နေရာရလို့ လူရာဝင်ပြီမထင်နဲ့…နင့်ကို ငါတို့ ပြည်သူတွေကလဲ မစင်ထက်ရွံတယ်…ကမ္ဘာ့အလယ်လဲ နင်က လက်နက်ကိုင် အာဏာရူးထက် မပိုဘူး…ဒါကြောင့် နင့်ကို အယုံအကြည်မရှိလို့ နင့်လက်အောက် မေနဘဲ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတွေ အကုန်ထွက်သွားကြတာ..ကိုယ့်အဆင့်ကိုယ်ရော သိရဲ့လား….
မကြာသေးခင်ကမှ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး အရာရာ ဦးမော့လာတဲ့ ငါတို့ နိုင်ငံလေး နင်အာဏာသိမ်းတဲ့ ၅ လအတွင်း အကုန် ချွတ်ခြုံကျကုန်ပြီ…စက်ရုံတွေ အလုပ်ရပ်လိုက်ရလို့ အလုပ်လက်မဲ့တွေဖြစ်ကုန်ပြီ၊ နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီတွေလဲ ထွက်သွားကြပြီ၊ ရှေ့ဆက်လုပ်မယ့် စာချုပ်တွေလဲ ရပ်လိုက်ကြပြီ၊ ကျန်းမာရေး ကဏ္ဍလဲ ပြိုလဲသွားပြီ၊ ပညာရေးလဲ ကျဆုံးသွားပြီ၊ သဘာဝကြိုးဝိုင်းတွေကနေပြီးတော့လဲ သစ်တွေခိုးထုတ်နေကြပြီ၊ အုပ်ချုပ်သူနေရာကို လုထားသူ ကိုယ်တိုင်က လူသတ်သမား၊ သူခိုးဓားပြ ဖြစ်နေတော့ တရားရေး မဏ္ဍိုင်က လုံးလုံး ပြိုလဲသွားပြီ၊ စစ်သားတွေ မြင်ရင် မီးတွေပိတ်သူပိတ်၊ ထွက်ပြေးသူ ပြေးနေကြရပြီး ဥပေဒမဲ့ လုပ်ရပ်တွေအတွက် တိုင်စရာနေရာတွေ မဲ့ကုန်ပြီ…
ငါတို့ တိုင်းပြည် လုံးလုံးပျက်ဆီးသွားပြီ…အဲ့ဒါ မင်းအောင်လှိုင် နင့်ကြောင့်…နင်ဟာ အာဏာရူးတတ်တာကလွဲရင် သိက္ခာမရှိ၊ ညှာတာမှုမရှိ၊ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်မရှိ၊ တိုင်းပြည် ချစ်စိတ်မရှိတဲ့ လူ့အန္ဓကြီးဘဲ…လူမစုံတော့တဲ့ မိသားစုတွေ၊ ပြန်လာခွင့်မရတဲ့ လူတွေ၊ အနာဂါတ်ပြောက်သွားတဲ့ လူငယ်တွေနဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့ ငါတို့ တိုင်းပြည်အတွက် ဘဝအဆက်ဆက် နင့်ကို မကြေဘူး မင်းအောင်လှိုင်….#credit
မိုး ယုကို says:
အျော လူတှလေူတှေ ပို့တငျလိုကျတဲ့တယောကျက ရှူးတိုကျလိုကျတာ ပွေးပီး ဟောငျလိုကျ ကိုကျလိုကျကွတာ မနဲပါ့လား….ကို့ကိုယျကိုဘာဖဈသှားပီလဲ ပွနျစဥျးစားကွညျ့ကွအုံး…ထမငျးစားတယျဆိုရငျပေါ့..
2021-07-09 at 12:36 AM
2021-07-09 at 10:06 AM
2021-07-09 at 2:30 PM
Aunty Htwe says:
အားလုံး ဝိုငျးဝနျးတကျညီလကျညီ ဝိုငျးကွိုးစားခဲ့ကွရတဲ့ နိုငျငံကို အယုတျတမာတဈစု ဖကျြစီးလိုကျတာ ဆုတျပွတျနပေီ
U Ye says:
2021-07-09 at 6:34 PM
ကိုrodney sanlwin.မဟုတျလား မှတျမိတယျနျော big fun par
Aye Aye As Ana says:
2021-07-10 at 5:29 PM
2021-07-10 at 8:35 PM